Fekitori Kuratidzwa - TMTeck Chishandiso Co., Ltd.
Une mubvunzo? Tipe runhare:+8613911515082
Concrete ukobvu Gauge
Webster Kuoma Tester
Penzura Kuomesa Tester
Micro Kuomesa Tester
Yese Kuomarara Tester
LCD / CCD Kuyera Sisitimu
Kongiri Bvunzo Nyundo
Eddy Yazvino Chikanganiso Detector
Ultrasonic Phased Array Kukanganisa Detector
Magnetic Particle Kuedzwa
Yakagadziriswa Array Protees & Wedge
Ultrasonic Transducer Tambo
UV NDT Mwenje
Eddy Iyezvino Conductivity Meter
Vibration Ongororo & Balancer
Metallographic Specimen Kugadzirira
Vachikuya Makorari Machine
Metallurgcal Kucheka Muchina
Metallographic Kuisa Press
Isu tinovimbisa kukupa iwe yekutanga-kirasi mhando yezvigadzirwa neyekutanga fekitori yekugadzira uye kurongedza. Isu tinonyatso kutevedzera zvinodiwa nehunyanzvi zviyero, maitiro ese anotarisirwa uye anoongororwa neyakagadzika kuverengera mhando yepamusoro yezvigadzirwa.
Chero mibvunzo nezvehunhu, isu tinogona kukupa iwe chigadzirwa sosi chitupa, kune chaiwo anodikanwa evatengi, isu tinogona kuitisa yakazara yakazara rabhoritari bvunzo.
Kubatana pamwe nehunhu uye hunyanzvi hwekutarisira masimba esisitimu, tinoshandisa zviridzwa zvemberi uye zvinobudirira zvekuyedza, zvigadzirwa zvese zvakapfuura nenzira dzakaomarara dzekuyedza kuona kugadzikana kwechigadzirwa nekuenderana. Isu tine sainzi uye yakaoma mhando yekudzora bvunzo maitiro, zvinoenderana neese akakosha emunyika uye epasi rese indasitiri standard
Zvinoenderana nemaindasitiri akasiyana uye vatengi zvinodiwa, isu tinogona kupa zvakajairwa masevhisi nehunyanzvi kudiwa ongororo uye basa reunyanzvi dhizaini kusangana nezvinodiwa zvako. TMTeck senhengo dzedare rekomisheni yeindasitiri yeNDT, inoshingairira kutora chikamu mukuumbwa kwemazinga emabhizimusi, kudzokorodza uye akakodzera indasitiri zviyero zvekunyora. kupa mipiro yakafanira mukuvandudza indasitiri yeNTT. Parizvino, TMTeck zvigadzirwa zvave zvinokurudzirwa mhando yemunyika bvunzo komiti uye yenyika yakasarudzika ongororo system yekuongorora, yave ichishandiswa zvakanyanya mukugadzira, kugadzira, mhando yekudzora maitiro echinhu chakamanikidza, yekumanikidza mudziyo, avhiyesheni, muchadenga, simba remagetsi, peturu, kemikari, Mapaipi, indasitiri yemauto, indasitiri yenyukireya, ngarava, mota, simbi, chivakwa chesimbi, njanji, yunivhesiti, yakaita basa rakakosha mukusimudzira kukurumidza kukura kweNTT tekinoroji uye mhando yezvigadzirwa zvemabhizimusi, inovimbisa basa rekuchengetedza rekugadzirwa kwemaindasitiri uye kudzikisa njodzi yekutengesa.TMTeck inogona kugadzira zviridzwa sezvinodiwa nevatengi.do OEM / ODM sevhisi.
TMTeck ine yakakwana yekugadzira tekinoroji, inopedza nzira dzekuyedza uye yakasimba R & D kugona. Kubva ku NDT chiridzwa chinotakurika kusvika kune huru otomatiki yekuona system, TMTeck ine kodzero dzenzvimbo dzehungwaru, zvigadzirwa zvepamutemo uye zvekopirita zve software. Izvo zvigadzirwa zvakapihwa zita rezvimiririra zvigadzirwa zvekuvandudza. TMTeck inoshandisa masayendisiti matanho ekugadzirisa maitiro ekugadzira, kubva paR&D kusvika pakugadzira, zvigadzirwa zvese zvinoenderana neiyo ISO9001, chimwe nechimwe chinhu uye chiridzwa zvichapfuura kuongororwa kwakasimba uye bvunzo pamberi pekusununguka, kusangana kwechiridzwa uye kugadzirisa mamiriro ekugadzirisa zvichanyatsoenderana neyakajairwa maitiro uye kutaurwa kuona mhando yechigadzirwa. Hunhu uye mashandiro eTMTeck zvigadzirwa zvasvika kune iyo indasitiri inotungamira nhanho. TMTeck zvigadzirwa zvakapasa akawanda makuru mahunyanzvi zvitupa senge EU CE chitupa, iyo Russian GOST chitupa, zvizere zvinoenderana neepasi rose inoenderana indasitiri zviyero.
International department rekutengesa maneja: Tina L.
PAMUSORO pe TMTECK
Nhoroondo & Zviitiko
Kuona & Isu
Mhinduro kudanho renyika, TMTe ...
Pipe Calibration Zvidhinha, Ultrasonic Transducer Tambo, Calibration Mabhokisi, Kuchengetedza Bvunzo Bvunzo, Ut Test Bvunzo, Ultrasonic Calibration Block,
TMTeck Chishandiso Co., Ltd.